Miseensooni WBO Xollaay Turan Leenjii Xumuran – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioMiseensooni WBO Xollaay Turan Leenjii Xumuran
Faayilii – Loltoota ABO
FINFINNEE — (voaafaanoromoo)—-Miseensooni WBO duraan mooraa leenjii Xollaay galfamanii ji’otaa 4f leenjifamaa turan leenjii xumuru isaanii Raadiyoo Sagaalee Amerikaatti himanii jiran.
Miseensooni WBO kunneen yeroo ammaa daamee hojii adda addaatti bobba’uuf rammadi ka fudhatan tahuu Obbo Adimaasuu Daamxoo Hoogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Motummaa Naannoo Oromiyaa ibsanii jiran. Gabaasaa guutuu caqasaa.
NAQAMTEE — Barreessaan Kitaaba ‘Yoomilan’ jedhamuu, Amaanu’eel Balaay magaalaa Naqamteetti osoo kitaaba isaa eebbisiisuuf keessummoota simataa jiruu galma hoteelaa qophichi itti geggeessamu keessaa poolisiin qabamee fudhatamuu abbaan isaa VOAtti himan.
Gama biraatiin immoo, achuma Wallagga Bahaa, aanaa Eebantuu keessatti barsiisota akka Raggaasaa Wiirtuu, Gammachuu Gannatii, Gammachuu Itichaa fi Alii Bayyanaa dabalee namoonni hedduun qabamanii hidhamuu jiraattonni VOAtti himanii jiran. Bakka bu’aan Waajjira ABO magaalaa Amboo Kaayyoo Fufaa jedhaman, Ambo irraa akkasumas kan ammaan dura kitaaba kuusaa walaloolee maxxansitee turte Lalisee Mekokonnen magaalaa Finfinnee irraa qabamuu isaanii hiriyyoonnii fi waahiloonni isaanii dubbatanii jiran.
Hidhaa bakka garaa garaatti raawwate jedhame kana ilaalchisee akka deebii anga’oota Mootummaa sadarkaa addaa irraa deebii gahaa argachuuf carraaqqii hedduu godheyyuu, haga ammaatti ka quubsaatti deebii naaf kenne hin arganne jedha, gabaasaan VOA Naakoor Malkaa.